बोनसको म्याद सकिन्छ: अगस्ट 8, 2018
तपाईंको बाटो लामो र थोरै थियो, तर अन्तमा, तपाईं यहाँ छन्, पिंग-भेगासमा! तपाईंले यसको जुवा ठाउँका ठाउँहरू र मेगा ज्याकपोटहरूको बारेमा धेरै कथाहरू सुन्नुभएको छ जुन तपाईले यहाँ सबै जाँच गर्न यहाँ आउन मद्दत गर्न सक्नुहुन्न। एक ज्यूनी मेलोलाई बिस्तारै, तपाईं ए एल ग्रान्डो सामनियको प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ, तर धेरै भयानक गार्डनका एक जोडीले तपाईंको बाटो अवरुद्ध गर्दैछ। "तपाईं मानव जस्तो गंध लगाउनुहुन्छ, कुनै मानिसलाई अनुमति छैन", तिनीहरू बढ्छ। कस्तो शर्म, तपाईं छोड्न सक्नुहुन्न, त्यहाँ एक छ ठूलो पकड दाँतमा! अचानक, तपाईं एक सानो डुङ्गा पेंगुइन को नजिक र फुसफुसा आउँदैछ, "माछा र माछा पट्टी मा जानुहोस्, श्री शेफ त्यहाँ त्यहाँ र आफ्नो विशेष अल्ट्रा मसालेदार माछा कटोरा को आदेश, उल्लेख छैन कि तपाईं एक वास्तविक जस्तै गंध लगाउन चाहानुहुन्छ पेंगुइन। कुनै पैसा आवश्यक छैन, केवल तपाईसँग तपाइँको जम्मा उपहार साझा गर्नुहोस् ":
4. एक नकली बीक पहनें।
फ्री स्पिन दुवै पीसी र खेलकुद मोबाइल संस्करणमा उपलब्ध छन्। प्रत्येक स्पिन लायक छ 0.1 usd / eur / aud / cad, 1 sek / nok / cny,5रक्सी, 10 jpy, तपाईंको खाता मुद्रामा निर्भर गर्दछ। 20x wagering सँग नकद बोनसको रूपमा नि: शुल्क स्पिनमा भएका प्यानहरू तुरुन्तै तपाईंको बोनस ब्यालेन्समा देखा पर्नेछ।
अपटाउन एसेस बोनस कोडहरू 2020
पेन्गुइनमा 25 फ्रीस्पीन्स ...